Ronald Koeman oo ka hadlay xasuuqii loogu geystay gurigooda xilli uu amaan kala duldhacay Mbappe. Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Ronald Koeman oo ka hadlay xasuuqii loogu geystay gurigooda xilli uu amaan...
Ronald Koeman oo ka hadlay xasuuqii loogu geystay gurigooda xilli uu amaan kala duldhacay Mbappe.
Ronald Koeman wuxuu amaaney Kylian Mbappe halka uu qirtay in Barcelona ay tahay inay aqbasho Paris Saint-Germain inay heysato koox dhameystirannka dib qaab ciyaareedkoodii liitay Champions League ee ka dhacay Camp Nou.
PSG ayaa 4-1 ku xasuuqaday barcelona ciyaar uu sedaxleey dhaliyey xidiga mustaqbalka weyn leh Mbappe kadib gool madi ah ay ku hormareen barcelona waxaana xasuuq ba,an loogu geystay gurigooda oo mudo looga adkaan walloow taasi xalay lasoo afjaray.
Lionel Messi, oo si weyn loola xiriiriyay PSG, ayaa gooldhalinta ku furay rigoore ka hor inta aysan booqdayaasha Faransiiska la wareegin xukunka garoonka oo kala ahaa Mbappe iyo Moise Kean oo ciida cunsiiyeen kooxda sanadahaan burbursan ee barcelona iyadoona la arki doono waxa dhaca 10 ka maarso oo lugta labaad lagu ciyaari doono garoonka PSG.
Tababaraha kooxda Barca Koeman ayaa qiray in heerka sare ee PSG ay u cadahay inuu arko isla markaana uu qirtay in kooxda LaLiga ee isku xirta ay leeyihiin qaab ay ku aadaan si ay ula tartamaan xidiga uu horkacayo Mauricio Pochettino.
Way ka sarreeyeen aad bay u fiicnaayeen gaar ahaan Thanks to Mbappe ayuu yidhi Koeman.
Qeybtii hore waa isku dheelitirnaan 1-0, Ousmane Dembele wuxuu helay fursad wanaagsan Qeybta labaad ee ciyaarta, waxaan qabnay dhibaatooyin dhanka difaaca ah Waxay muujiyeen inay ka sarreeyaan, kubbadda iyo gaar ahaan jir ahaan.
Waxay lahaayeen koox ka dhameystiran kuwayaga Waa inaan aqbalnaa oo aan sii wadnaa horumarka Waan ognahay inay taasi dhici karto Kooxdaan ayaa inaga horreysa.
Previous articleJorgen Klopp oo ka hadlay guushii xalay iyo Allison oo dib u helay bandhig qurxoon.
Next articleAlexandre Lacazette oo ka mid ah ciyaartoyda ay Arsenal dooneyso inay iska iibiso xagaaga?